Chọpụta ọmarịcha omenala ndị Australia | Akụkọ Njem
Australia bụ mba dị obere, nke ndị njem si mba ọzọ zụlite, ya mere ọdịbendị ha bụ nnukwu ngwakọta. Agbanyeghị, ọ dịkwa mkpa iburu n'uche ọdịbendị agbụrụ nke ndị nwe ala, nke na-adịwanye mkpa iji zọpụta mgbọrọgwụ nke mba ahụ.
Taa, anyị ga-amata ntakịrị ihe banyere Omenala Australia, obodo mara mma ma na-adọrọ mmasị maka ụdị ndị njem niile. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nnukwu ngwakọta nke omenala na ọdịbendị na-eju onye ọ bụla gara ileta ya anya.
1 Ihe ọ drinksụ drinksụ Australia
2 Ememme ndị a na-eme n’Ọstrelia
4 Nri na Australia
5 Ndị Aborigine
Australia bụ obodo anyị ga-enwe ahụ iru ala nke ukwuu, n'ihi na ha enweghị omenala ndị dị iche na mba Europe. Dị ka nke ya onu ogugu sitere na Europe, kọstọm agbanweela. Ọ bụ ya mere ihe ọ drinksụ drinksụ kachasị amasị ya bụ biya, kọfị na n'ezie tii. Ekwesiri ighota ihe di uku nke Bekee na gastronomy ya nile. A na-etolite omenaala kọfị nke ukwuu na ọ na-ahụkarị ebe enwere ọbụna baristas ọkachamara. N'aka nke ọzọ, tii anaghị akọ ụlo n'ụlọ niile, isoro nri ụfọdụ, ka a na-eme ya na England.
Ememme ndị a na-eme n’Ọstrelia
N’Ọstrelia, ha na-eme ememme ndị ọzọ, dị ka Afọ Ọhụrụ ma ọ bụ Krismas, nke a na-eme n’akụkụ osimiri n’ọtụtụ oge. Ọ bụ ihe dị oke mkpa, n'ihi na ịnọ na ndịda ugwu, Krismas dabara n'oge ọkọchị na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-eme ihe n'akụkụ osimiri. Ndị bi na mgbago ugwu na-ahụ nke a dịka ihe dị ịtụnanya, mana obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ebe kachasị mma iji nọrọ n'oge Krismas dị iche. N'aka nke ọzọ, ọdịbendị ha enwetakwala Halloween, yabụ na October 31 onye ọ bụla na-eji ejiji. Enwere ụbọchị pụrụ iche maka ndị Australia, na Jenụwarị 26 dịka ọ bụ ụbọchị Australia. A na-eme ya na ụbọchị nke ọchịchị Bekee na kọntinent ahụ, ọ bụ ezie na ugbu a, ọ bụghị n'esemokwu, ọ ka bụ ụbọchị zuru oke iji soro ezinụlọ nwee ezumike na ịnụ ụtọ mmemme na egwu egwu maka ụbọchị ahụ.
El ndụ ndị Australia Ọ dị ezigbo mfe. Obi abụọ adịghị ya na enwere nnukwu mgbanwe n'ụdị ndụ n'ụsọ osimiri, yana ọdịnala sọfụfụ dị egwu, na n'ime ime, ebe enwere nnukwu ugbo nwere ọtụtụ ọrụ na nnukwu ubi. O doro anya na imirikiti ndị bi na ya na-etinye uche na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ma a gaghị echefu ebe dị n'Australia, nke nwere ike ịmasị. Ọ bụrụ na ihe tụrụ anyị n’anya gbasara ndị Ọstrelia, ọ bụ nnabata ha na etu ha si emeghe ya, tụmadị mmetụta ndị bekee na mba ahụ nwere. Ha bụ ndị na-emeghe ma na-enwe obi ụtọ n'ozuzu ha, na-anabata nnabata ndị ọbịa nke ọma.
Nri na Australia
Dị ka n'ọtụtụ mba Anglo-Saxon, nri ehihie adịghị oke mkpa, ihe na-amabughị anyị na Spain, ebe ọ bụ nri anyị. N’Australia, a na-enye nri abalị dị oke mkpa karị ma a na-eme ya n’ihe dịka elekere asaa nke ụtụtụ, ebe ọ bụ na ha na-ebilitekwa karịa n’oge anyị. Ihe Nri ehihie bụ nri ehihie a na-ewe ya ihe dịka elekere 12.30 pm, ịbụ nri dị mfe nke aperitif. A na-eme nri ndị a na-akwụsị ọrụ, ọ bụ ya mere ha ji dị ọkụ, ebe ọ bụ na ụbọchị na-agakarị n'ihu ruo elekere ise nke ehihie.
Na nri ị ga-eme a pụrụ iche banyere ahịhịa amịkpọ. N'ihi ihu igwe dị mma n'oge a n'afọ, ịkọ ahịhịa bụ ihe dị mkpa maka ndụ ndị Australia kwa ụbọchị. Ọ na-amasị ha ịme achịcha na ọtụtụ n'ime ụlọ ndị nwere obere ubi iji nwee ike iri nri n'èzí na-eji mmesapụ aka na-emesapụ aka.
Site na nchịkwa batara n'ọdịbendị ndị aborigine n'echiche bụ na ha bi n'ókèala ha ma mesoo ha dị ka ụmụ amaala nke abụọ. Ihe Ndị Aborigine na-ewepụta ọ ka na-ekpo ọkụ taa, ọ bụ ezie na taa, omenaala ya na ụzọ ndụ ya na-alaghachi. Anyị nwere ike ịmụtakwu banyere ndị biri na Australia tupu njem ndị Europe. Gaghị enwe ike iguzogide ịkpọ Didgeridoo iji mepụta ụda ndị ahụ pụrụ iche nke metụtara Australia.
N’Australia enwere oké egwuregwu ọdịbendị. Otu nke ọkacha mmasị na-sọọfụ, nke nwere ike omume na ọtụtụ osimiri n'ụsọ oké osimiri. E nwere ọtụtụ sọfụ ụlọ akwụkwọ na-enwe ụfọdụ klas na mara mma Australian osimiri. N'aka nke ọzọ, ịgba rugby dị ezigbo mkpa, yabụ na ị gaghị eleghara ohere iji hụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke egwuregwu a na-achọsi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Omenala Australia
Omenala ndị Canada